Home Wararka Dagaal siyaasadeed ka dhex qarxay Farmaajo & Rooble
[XOG] Dagaal siyaasadeed ka dhex qarxay Farmaajo & Rooble [warqad cabasha ah u gudbiyay Beesha Caalamka]
Ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa MOL u xaqiijiyay in Rooble & Farmaajo uu soo kala dhex galay tuhun siyaasadeed. Tuhunka ayaa bilowday kaddib markii uu Farmaajo ka war-wareegay in uu fuliyo qodobo laga rabo ka hor shirka uu iclaamiyay Rooble ee lagu wado in uu dhaco 20 bishan May.
Madaxweynaha Muddo xileedkiisa Dhammaaday ayaa diidan seddexdan qodob in uu ka tanaasulo:
In uu saxiixo warqadda awood wareejinta, shirka Afisyoonina uga qeyb galo in uu yahay murashax
In uu caddeeyo mowqifkiisa in uu yahay murashax iyo in kale
In uu amarada taliska ciidanka uu si toos ah ugu wareejiyo RW Rooble
Tuhunka ayaa ka dhashay kaddib markii uu RW Rooble baraha bulshada ka arkay warqad uu qoray Wasiirkiisa Arrimaha Dibadda, taasoo dowladda Federaalka ah kaga codsaneyso Ururka Midowga Afrika in aanay raalli ka ahayn Wakiilka loo magacaabay dhexdhexaadinta arrimaha Doorashooyinka, Madaxweynihii hore ee Ghana John Mahama.
RW Rooble ayaa iska beri yeelay una sheegay wakiilada beesha caalamka in aanu la qabin fekerkaas Madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday, wuxuuna Rooble sheegay in warqadaa aay xadgudub ku tahay in isaga looga danbeeyo arrimaha Doorashooyinka.
Waxaa kale oo laga soo xigtay Xafiiska Rooble in saraakiil ka tirsan CXDS oo uu horey ugu amray Rooble in aay isaga si toos ah uga amar qaataan, lagu wargeliyay in aanay ka amar qaadan karin xafiiskiisa, waxaana amarkaas aay sheegeen saraakiisha in uu bixiyay Agaasimaha NISA Fahad Yasin.
Kooxda ololaha Doorashada Farmaajo ayaa isku dayaya in aay carqaladeeyaan geeddi socodka Doorashooyinka ee uu xalka u raadinaayo Rooble.
Caqabadaha ugu waaweyn ee Rooble uu la kulmaayo ayaa ka imanaya dhowr Wasiir oo daacad u ah Farmaajo iyo Madaxweynaha Galmudug Axmed QoorQoor sida MOL aay ogaatay.